Qubsuma Koo 34: Lammii Itiyoophiyaa Kaataaloniyaa foxxoqxuurraa - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 34: Lammii Itiyoophiyaa Kaataaloniyaa foxxoqxuurraa
Madda suuraa, Yittaagesu Zewedu
Yitaagasuu Zawudee Kaatalooniyaarraa
Yittaagasuu Zawuduun jedhama. Biyya baha Ispeenitti argamtuufi dhiyeenya kana foxxoquu waliin walqabatee bulchiinsa maqaanshee dhahamu Kaataaloniyaa keessan jiraadha.
As kanan dhufe waggaa sadii dura yoo ta'u barnoota polotikaal ikonomii digrii sadaffaa yunivarsiitii Rooviraa Virjiiliitti hordofaan jira.
Namoota of qaboo Kaataaloniyaa
Namootni Ispeen baayyeen akkuma saboota handaara galaana meditaraaniyaanii, jiruu fi jireenya bashaa fi dhiphina hinqabne hordofu. Kunimmoo biyyoota Awurooppaa biro irraa adda isaan godha.
Amalli namoota Kaataalaan xiqqoo adda dha. Aadaa isaanitti jireenya maatiif iddoo guddaa waan qabaniif hawaasa biraafis ta'e, keessummaa waliin hariiroo uumuun isaan rakkisa. Garuu sanyiidhaan nama hin qoodani.
Gaaffiin isaan kana dura waa'ee foxxoquu kaasanii turan amma qabbanaa'eera. Namooti gaaffii foxxoquu kaasan akka hidhaman ni dhageenya. Sochiin amma jiru hidhamtoota hiiksisuu irratti kan fuulleefate dha.
Madda suuraa, Yitagesu Zewedu
Bakka miidhagaa Kaatalooniyaa muraasa
Waggaa darbe baatii Onkololeessa keessa yaaddoo guddaatu ture, namoota lammii Kaataaloniyaa hin taaneef immoo dhiphina guddaa ture.
Nyaanni guuteera, nuuf hin tahu malee
Nyaata gosa garaagaraa idila addunyaa irratti itiin beekaman baayyee qabu. Nyaati baayyeensaa garuu nama biyya keenyaa hedduudhaan kan balfamudha.
Foon booyyee, lubbuu qabeeyyii bishaan keessa jiraataniifi cilalluufaallee ni sooratu. Lafa iji ejersaa baayyinaan itti oomishamu waan taheef, isa aragachuun hanaga tahe nama jajjabeessa.
Nyaati isaanii baruu waan hin dandeenyeef, yeroo baayyee paastaan fayyadama. Buddeen, mimmixaafi shiroo irraa fagaatanii jiraachuun ulfaataadha.
Nyaata biyya sanatti baramaa ta'e
Abjuu keenyaan yeroo hundaa biyyuma jiraanna
Dhaladhee kanin guddadhe, Shaashamannee naannoo 81 jedhamu dha. Biyyaa fi naannoo waan ilaallatu mara nan yaada. Nyaati, dhugaatiin, hiriyyooti koo ija koo dura deemu. Hundi keenyi abjuu keenyaan biyya bullaa inni jedhamu, anaafis ni hojjeta.
Waa'ee biyyaakoo yeroon yaadu...
Yeroon biyya kana jiraadhu waanin argu biyya koos otoo jiraatee jedheen hawwa. Bu'uraaleen misoomaa hundi guutamaniiru. Waggaa sadii keessatti ibsaan baduu kanin arge guyyaa tokko qofa.
Siyaasni biyyaa keenyaa dhidhima seene keessaa bahee, biyya sirni dimookiraasii gaarii diriiree lammiileen yaada bilisaan ibsachaa, walqixxummaa fi haqaan itti jiraatan akka tahu namoota hawwan keessa tokko dha.
Karaa diinagdeenis lammiileen biyyattii leecalloo biyyattii walqixxummaan fayyadamanii, kabajamanii akka jiraatani nan falma.
Sanyummaa, walii waliin wal balleessuun badee, akkuma durii wal dandeenyee lafa itti jiraannu akka ta'u abdiin qaba. Abdiin koo akka milkaa'uuf naa gargaaru. Ameen.
Gaazexeessaan BBC Girmaay Gabruu himata malee gadhiifame
Kampaanii fincaan dubartoota ulfaa "qorichaaf" biturratti qorannoo gaggeeffamaa jira